အဲပုဂံမှ ဟဲဟိုးလေယာဉ် အရေးပေါ် ဆင်းသက်ရ၊ စုစုပေါင်း ၂ ဦးသေဆုံး | ဧရာဝတီ
အဲပုဂံမှ ဟဲဟိုးလေယာဉ် အရေးပေါ် ဆင်းသက်ရ၊ စုစုပေါင်း ၂ ဦးသေဆုံး
ရန်ပိုင်| December 25, 2012 | Hits:15,210
15 | | အရေးပေါ် ဆင်းသက်လိုက်ရပြီး မီးလောင်ပျက်စီးသွားသော အဲပုဂံလေယာဉ် (ဓာတ်ပုံ – ထူးအိမ်သွင် (ဟဲဟိုး) / Tachileik Facebook)
ရန်ကုန် – မန္တလေး – ဟဲဟိုး ခရီစဉ် ပျံသန်းနေသည် အဲပုဂံ လေကြောင်းလိုင်းမှ w9-011 လေယာဉ်သည် ယနေ့နံနက် ၈နာရီ ၅၅ မိနစ်ခန့်က ဟဲဟိုးလေဆိပ်သို့မရောက်မီ အရေးပေါ် ဆင်းသက်ရာမှ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ခရီးသည် ၆၅ ဦး လိုက်ပါလာသည့် အဆိုပါလေယာဉ်သည် ဟဲဟိုးလေဆိပ်သို့ ဆင်းသက်ရန် ၂ မိုင်ခန့်အကွာသို့ ရောက်ရှိပျံသန်းနေစဉ် ရုတ်တရက် လယ်ကွင်းအတွင်းသို့ အရေးပေါ် ဆင်းသက်လိုက်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မည်သည့်အတွက် အဆိုပါလေယာဉ် အရေးပေါ် ဆင်းသက်ခဲ့ရခြင်းကို မသိရသေးသော်လည်း၊ လေယာဉ်ပေါ်တွင် လိုက်ပါလာသည့် ခရီးသည်များအနက် ၉ ဦး နှင့် လေယာဉ်မောင်း ၂ ဦး ဒဏ်ရာရရှိကာ ခရီးသည်တဦးသေဆုံးကြောင်း အဲပုဂံ လေကြောင်းလိုင်းမှ တရား ၀င်ထုတ်ပြန်သည်။
ယခုအခါ ဒဏ်ရာရရှိသည့် ခရီးသည်များမှာ တောင်ကြီးမြို့ စ၀်စံထွန်း ဆေးရုံတွင် ဆေးကုသမှုခံယူနေပြီး ကျန်ခရီးသည် ၅၅ ဦး ကိုလည်း ဟဲဟိုးလေဆိပ်တွင် စောင့်ရှောက်ထားကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့ လယ်ကွင်းအတွင်း အရေးပေါ်ဆင်းသက်ခဲ့သည့် လေယာဉ်သည် မြေပြင်ပေါ်တွင် ဆိုင်ကယ်ဖြင့် သွားလာသူနှစ်ဦးကိုလည်း တိုက်မိသည့်အတွက် လူတဦး ထပ်မံသေဆုံးသွားကြောင်း MRTV4ရုပ်သံဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
မီးလောင်သွားသည့် လေယာဉ်ပေါ်တွင် ခရစ္စမတ် ပွဲတော်ရက် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်လည်ပတ်သည့် နိုင်ငံခြားသား ခရီးသည် အများစု ပါဝင်သည်ဟု သိရှိရသည်။
အစိုးရက လတ်တလော ထုတ်ပြန်သည့်သတင်းများအရမူ ဟဲဟိုးလေဆိပ်တ၀ိုက် မြူများကျဆင်းနေသည့်အတွက် အရေးပေါ် ဆင်းသက်ခဲ့ရသည်ဟု ဆိုသည်။
သို့သော် မြန်မာလေကြောင်း ဦးစီးဌာနကမူ နိုင်ငံတကာ လေကြောင်းစစ်ဆေးရေး စည်းမျဉ်းများအရ လေယာဉ်ထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီ၊ လေကြောင်း ထိန်းသိမ်းရေးဌာန၊ လေကြောင်းဦးစီး၊ ပို့ဆောင်ရေး ၀န်ကြီးဌာန စသည့်တို့ ပူးပေါင်းပြီး ခုံရုံးဖွဲ့ကာ စစ်ဆေးမည်ဟု လေကြောင်း ဦးစီးဌာနမှ အမည်မဖော်လိုသည့် အရာရှိတဦးက ပြောသည်။
“လေယာဉ်မှာ နိုင်ငံခြားသားတွေလည်းပါတော့ အခြေအနေကတော့ ရှုပ်ထွေးတယ်။ မြူဆိုင်းနေမယ် ဆိုရင်လည်း ဟဲဟိုးလေဆိပ် ထိန်းသိမ်းရေးက ကြိုပြီးသတင်းပို့ထားပြီး ဖြစ်မယ်။ ရုတ်တရက် နှင်းကျ မြူဆိုင်းတယ်ဆိုရင်တော့ တမျိုးပေါ့။ ဒါကြောင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး လုပ်ရပါမယ်” ဟု အဆိုပါ အရာရှိက ဆိုသည်။
ကမ္ဘာတ၀ှမ်းရှိ လေဆိပ်များ၊ လေကြောင်းလိုင်းများ၊ လေယာဉ်များသည် ကုလသမဂ္ဂ လက်အောက်ခံ အဖွဲ့အစည်းတခုဖြစ်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြို့ပြလေကြောင်း အဖွဲ့ချုပ် ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် ရှိသည့်အတွက် ချမှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်းများအတိုင်း လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ခရီးသည် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု၊ ပစ္စည်းပျောက်ရှမှုများနှင့် ပတ်သက်၍မှု ခုံရုံးအဖွဲ့က ဆုံးဖြတ်ကာ ပေးလျော်စေမည်ဟု ဆက်လက် ရှင်းပြသည်။
ယခု အရေးပေါ်ဆင်းသက်ခဲ့ရသည့် လေယာဉ်သည် ဖော်ကာ 100 အမျိုးအစား ဂျက်လေယာဉ်ဖြစ်သည်။
ယခုနှစ်ဆန်းပိုင်း ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းကလည်း ကမ္ဘောဇ လေကြောင်းလိုင်း (Air KBZ) မှ ATR 72 အမျိုးအစား လေယာဉ်တစီး ရခိုင်ပြည်နယ် သံတွဲမြို့ မဇင်လေဆိပ် အဆင်းတွင် ဘီးချော်ပြီး ၀မ်းဗိုက်ဖြင့် ဆင်းသက်ခဲ့ရသည်။
မြန်မာ့လေကြောင်း လေယာဉ်တစီး ကော့သောင်းတွင် လမ်းချော်
“ခရီးသွား များလာရင် အချိန်ကိုက် အချိန်မီ လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းဖို့လိုတယ်”
မလေးရှား လေယာဉ် MH 17 ရဲ့ အထောက် အထားများ ယူကရိန်း သူပုန်ဖျောက်ဖျက်
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment yemyn December 25, 2012 - 3:17 pm	Every airline in Myanmar must be careful and lesson learned for other air lines.Every passengers life in your air lines hand.(Safety first before flight and choice the good quality pilot).
Reply	pnwara December 25, 2012 - 7:10 pm	အင်း-သတင်းတွေကလဲ တမျိုးစီပါလား- အစိုးရ သတင်းကတမျိုး-၀က်ဆိုက်ပေါ်က ဂျာနယ်သတင်းတွေက တမျိုး တဘာသာ-ဘယ်ဟာက အမှန်လဲဗျာ-လေယာဉ်ပျက်ကျတဲ့ သတင်းကတော့အားလုံးတူ တယ်။ ဒါတောင် သတင်းတခုက အဲယားပုဂံ ကွင်းမှားဆင်းသက်လို့သတင်းခေါင်းစဉ်တပ်ထားတော့ လေယာဉ်မှူး ညံ့လှပါလားဟု ကောက်ချက်ချမိ၏။ သတင်းဆုံးအောင် ဖတ်တော့မှ အော် ဒီလိုပါလားဟု သိရတယ်။ ဗိုလ်တင်ဦး ရဟတ်ယာဉ်ပျက်ကျ သေဆုံး စဉ်က အစိုးရ ကြေငြာသလို ရာသီဥတု ကြောင့်ပျက်ကျရတယ်ဆိုတဲ့ ယုတ္တိကင်းမဲ့တဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်ကိုဘယ်သူမှ မယုံကြည်ကြဘူး။ ရာသီဥတုကောင်းတယ် မကောင်းဘူးဆိုတာ အဲဒီဒေသက လူတွေသိနေတာဘဲ- အချိန်ကာလအရ ရာသီဥတု ဖေါက်ပြန်ချိန် ဟုတ်-မဟုတ် စဉ်းစားတတ်သူတိုင်း သိနေတဲ့ကိစ္စ- အခုလဲ ဆီးနှင်းတွေကျလို့ ဆိုတာ ဆောင်းတွင်းအခါမို့ဖြစ်နိုင်တယ်ထားပါဦး- အချိန်က မနက် ၁၀ နာရီ ထိုးခါနီးပြီဆိုတော့ မြူမှူန်ဝေကင်းလောက်တဲ့အချိန်ရောက်နေပြီ- လိမ်တော့ မလိမ်ကြပါနဲ့အမှန်တိုင်းထုတ်ပြန်ပေးကြပါ။
Reply	James December 25, 2012 - 7:47 pm	မောင်တေဇကလဲ..လေယဉ်မထွက်ခင်…ETကို…ဘာမှမတိုင်ပင်ဘဲထွက်တာကိုး….ကျွတ်ကျွတ်ကျွှတ်(စုတ်သပ်တဲ့အသံ)
Reply	??? December 26, 2012 - 1:18 am	Air Pagan က လူအသေအပျောက် မရှိဘူးလို့လည်း ကြေငြာတယ်။ ခရီးသည် တစ်ယောက်
(ဧည့်လမ်းညွှန်) သေတယ်လို့လည်း ကြေငြာတယ်။
ပြန်ကြားရေး ဒု-၀န်ကြီး ဦးရဲထွဋ်က (၁၁ နှစ် သမီး)တစ်ယောက် သေတယ်လို့ ပြောတယ်။ အပြစ်ဖုံးချင်လို့လား၊ ပြောချင်ရာပြောနေကြတာလား။
Reply	ပြည်သူ December 26, 2012 - 10:17 am	ခရီးသည် ၆၅ ဦး လိုက်ပါလာသည့် အဆိုပါလေယာဉ်သည် ဟဲဟိုးလေဆိပ်သို့ ဆင်းသက်ရန် ၂ မိုင်ခန့်အကွာသို့ ရောက်ရှိပျံသန်းနေစဉ် ရုတ်တရက် လယ်ကွင်းအတွင်းသို့ အရေးပေါ် ဆင်းသက်လိုက်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဟဲဟိုးလေဆိပ်မှာမြူတွေကျနေရင်လည်း အင်ဂျင်ကကောင်းနေပြီး ဆီရှိသေးတယ်ဆိုရင် အခြားမြူမကျတဲ့လေဆိပ်ကိုသွားပြီး ဆင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် နီးစပ်ရာ မြစ်တခုခုထဲကိုဆင်းမယ်ဆိုရင် လယ်ကွင်းထဲဆင်းတာထက်အများကြီးပိုဘေးကင်းမှာပါ။ နောက်တခုဖြစ်နိုင်တာက လေယာဉ်စက်ချို့ယွင်းလို့မဖြစ်မနေဆင်းလိုက်ရတာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရွေးစရာအချိန်ကိုမရှိတော့တဲ့ပုံရပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် လေယာဉ်စက်ကကောင်းနေရက်နဲ့မြူတွေဆိုင်းနေလို့ လယ်ကွင်းကိုလေယာဉ်ကွင်းနဲ့ မှားပြီးဆင်းတယ်ဆိုရင်တော့ မောင်းသူမှာအပြစ်ရှိပါတယ်။
ဘာပဲပြောပြော အဲပုဂံနဲ့မြန်မာပြည် နာမည်ပျက်ရတာပါ။ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေလန့်ပြီး တန့်သွားမှာစိုးရိမ်ရပါတယ်။ အစိုးရမှကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။
Reply	mgoogyaw December 26, 2012 - 9:37 pm	News are wrong. They have mentioned2persons died,but, The Tour Guide,11 year old boy,and victim from the ground, motor bike man U Pyar, total 3. Why,they say only 2? How to understand. Burma,is still the same like before,all the news are secret for their sake.WHY???
ဖားကန့်မြေပြိုမှုမှ အလောင်းအများစု အမည်နှင့်နေရပ်မသိသူများ ဖြစ်နေ
လူ ၆ ဦးသေဆုံးသည့် ဟားခါးပေါက်ကွဲမှု အကြမ်းဖက်မှုမဟုတ်ဘဲ ယမ်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ဖြစ်
ကရင်ပြည်နယ်တွင် ကျောင်းသား ၁၃၀ ကျော် အဆိပ်သင့်စေသည့်ရေကို ရန်ကုန်သို့ ပေးပို့စစ်ဆေး
ရန်ကုန်-စစ်တွေ ပြေးဆွဲနေသော ကံ့ကော်ထူး ကုန်တင်သင်္ဘော ပျောက်ဆုံးနေ
ရေဘေး အလှူယာဉ် တိမ်းမှောက်မှု သံဃာ ၂ ပါးနှင့် လူ ၃ ဦး သေဆုံး
ဦးဇော်ဇော်၏ ကူညီမှုဖြင့် ရေနစ်သေဆုံးသူ ကျောင်းသူ ၂ ဦး၏ ဖခင် စက်လှေမောင်းသူ အာမခံရ
စက်လှေမှောက်၍ အသုတ်မြို့က ကျောင်းသူ ၃ ဦး သေဆုံး
ရွှေလီဦး ခရီးသည်တင်ယာဉ် တိမ်းမှောက်မှု သေဆုံး ၉ ဦး အထိရှိလာ